မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည်ထပ်မံ စမ်းသပ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည်ထပ်မံ စမ်းသပ်
North Korean leader Kim Jong Un smiles with military officials in front ofascreen believed to show projectile launch in an unidentified location, North Korea, in this still image taken from video provided by KCNA August 3, 2019. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
မြောက်ကိုရီးယားက ဒုံးကျည်ထပ်မံ စမ်းသပ်
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံဟာ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဒုံးကျည် နှစ်စင်း စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်လိုက်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ကြည်းရေလေ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒုံးကျည်ကို ဖျောင်ဂန် တောင်ပိုင်းကနေ ပစ်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နောက်ပိုင်း မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ၈ ကြိမ်မြောက် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန် စစ်ဘက်တို့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းအချက်လက် စုဆောင်းနေပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ လိုလားကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုပြီးနောက် မကြာမီမှာပဲ ဒုံးကျည် စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွောကျကိုရီးယားက ဒုံးကညျြထပျမံ စမျးသပျ
မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံဟာ ဒီကနေ့ စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးမှာ ဒုံးကညျြ နှဈစငျး စမျးသပျ ပဈလှတျလိုကျကွောငျး တောငျကိုရီးယား ကွညျးရလေေ ပူးတှဲစဈဦးစီးခြုပျက ပွောပါတယျ။
မွောကျကိုရီးယားဟာ ဒုံးကညျြကို ဖြောငျဂနျ တောငျပိုငျးကနေ ပဈလှတျခဲ့တာဖွဈပွီး ဇူလိုငျလ ၂၅ ရကျနောကျပိုငျး မွောကျကိုရီးယားဘကျက ၈ ကွိမျမွောကျ ဒုံးကညျြစမျးသပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားနဲ့ အမရေိကနျ စဈဘကျတို့ဟာ မွောကျကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကညျြ ပဈလှတျမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ သတငျးအခကျြလကျ စုဆောငျးနပေါတယျ။ အမရေိကနျနဲ့ ဆှေးနှေးမှုလုပျဖို့ လိုလားကွောငျး မွောကျကိုရီးယား ဒုတိယ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက ပွောဆိုပွီးနောကျ မကွာမီမှာပဲ ဒုံးကညျြ စမျးသပျ ပဈလှတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဂျပန်နဲ့ ပွဲမှာ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်မပျက်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ မြန်မာနည်းပြ ချုပ်ပြော
Next articleလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ကျရင် တိုင်းပြည်ကို ပိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သူရဦးရွှေမန်း ပြော